Sekolim-panjakana: miomana amin’ny fidirana an-tsekoly ireo mpianatra | NewsMada
Sekolim-panjakana: miomana amin’ny fidirana an-tsekoly ireo mpianatra
Hiverina an-dakilasy, ny 19 novambra ho avy izao, ireo mpianatra amin’ny sekolim-panjakana rehetra manerana ny Nosy. Hiatrika ny fanomanan’ireo mpianatra kosa, manomboka anio, ireo mpampianatra hikarakara ny fandraisana ireo mpianatra.
Efa tapitra ny fisoratana anarana ho an’ny sekolim-panjakana. Mbola misy anefa ireo ray aman-dreny tonga miangavy any amin’ny talen-tsekoly handray ny zanany. Sahirana amin’ny fitadiavana vola hahafahana mampiditra ny zanany an-tsekoly ireo ray aman-dreny sasany ka izany ny antony nahatara ny sasany, raha ny fanazavan’ny talen-tsekoly iray tafaresaka taminay.
Voafetra ihany anefa ireo mpianatra raisina noho ny tsy fahampian’ny fotodrafitrasa handraisana azy ireo. Ireo zanaky ny fianakaviana tena sahirana no raisin’ny sekolim-panjakana amin’izao fotoana izao hitsinjovana ireo ankizy tsy afaka mianatra amin’ny sekoly tsy miankina.
Araka ny tetiandron’ny fampianarana navoakan’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena, hitsinjara dimy ny taom-pianarana 2018-2019. Any amin’ny 30 aogositra 2019 vao hifarana izany taom-pianarana izany.
Hotanterahina ny talata 3 septambra 2019 ny fanadinana CEPE. Ny 23 ka hatramin’ny 26 septambra ny fanadinana BEPC ary ny 29 sy 30 oktobra ny CAE/EP. Hatao ny 26 sy 27 novambra kosa ny CAP/EP.